भान्सामा खानेकुरा भण्डारण : यसरी बोत्तलमा राख्नु कति उचित ? -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ समय: १९:२४:०३
घरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको भण्डारका अनेक तरिका हुन्छन् । यसको लागि या त सिसाको बोतल÷डिब्बा प्रयोग हुन्छन् या त प्लास्टिकका । दैनिक उपभोग्य तेल, घिउ जस्ता पेय पदार्थ होस् या अन्य ठोस वस्तु नै । सबैको भण्डारको लागि प्रयोग हुने यस्ता सिसा र प्लास्टिकका भाँडाहरु मानव स्वास्थ्यको लागि कति लाभदायक र हानिकारक हुन्छ ?
सन् १९०० मा किल्नरले नयाँ बट्टा वा जार उत्पादकलाई पछिआएको ब्राण्डको रूपमा उल्लेख गर्दै आफूहरूको जस्तो सक्कली ब्राण्ड तिनीहरू नभएको दाबी ग¥यो । विभिन्न नेतृत्व पार गर्दै किलनर जार कम्पनी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा छ ।